Xukuumadda cusub ee Jabuuti - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Xukuumadda cusub ee Jabuuti
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Abriil, 2013, 02:32 GMT 05:32 SGA
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa wuxuu isku shaandheyn ku sameeyay golaha xukuumadda Jabuuti, iyadoo Raiisul Wasaare cusubna loo magacaabay Cabdulqaadi Kaamil Maxamed.
Madaxweynaha Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle
Madaxweynaha dalka Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wuxuu isku shaandheyn ku sameeyay golaha xukuumadda Jabuuti, iyadoo Raiisul wasaare cusub la magacaabay isla markaana uu meesha ka baxay Raiisul Wasaarihii xilka soo hayay dhawr iyo tobankii sano ee u dambeeyay Dileita Maxamed Dileita.
Wasiirro cusub ayaa ku soo biiray xukuumadda cusub ee Jabuuti, iyadoo tiradana la kordhiyay.
Raiisul wasaare cusub waxaa loo magacaabay Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo horey u ahaan jiray wasiirka gaashaandhigga Jabuuti.
Haddaba Xuseen Cumar Maygaag, oo ah weriye ka tirsan telefishinka dalka Jabuuti, ayaa waxa uu isbeddelkaasi uga warramay Farxaan Maxamed Jimcaale.